Maraykanku waxa uu fulin doonaa waajibaadka tallaalka COVID-19 ee ganacsiyada gaarka ah ka dib Sannadka Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Maraykanku waxa uu fulin doonaa waajibaadka tallaalka COVID-19 ee ganacsiyada gaarka ah ka dib Sannadka Cusub
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Maraykanku waxa uu fulin doonaa waajibaadka tallaalka COVID-19 ee ganacsiyada gaarka ah ka dib Sannadka Cusub.
Waa muhiim in la fahmo in ay weli jiraan shaqaale aad u badan oo aan la ilaalin oo halis ugu jira inay si xun u jirraan ama u dhintaan COVID-19.
Mareykanka ayaa bilaabi doona dhaqan gelinta tallaalka coronavirus ee qasabka ah ee shaqaalaha waaxyaha gaarka ah laga bilaabo Janaayo 4.
Ku guuldareysiga in aad u hogaansanto amarka tallaalka waxa ay la kulmi doontaa ganaaxyo culus ganacsiyada, kuwaas oo wajihi doona ganaax qiyaastii ah $14,000 xadgudubkiiba.
Ganaaxyada ayaa sii kordhin doona xadgudubyo badan, sida ay sheegeen saraakiisha sare.
The Aqalka Cad Maanta ayaa lagu dhawaaqay in Mareykanka uu bilaabi doono dhaqan gelinta amarka tallaalka COVID-19 ee Madaxweyne Biden ee shaqaalaha ganacsiga gaarka loo leeyahay laga bilaabo Janaayo 4, 2022.
Talaalka coronavirus ee qasabka ah ee ganacsiyada ayaa la dhaqan galin doonaa sanadka cusub kadib, sida uu qabo adeega saxaafada ee Aqalka Cad. Kuwa aan la tallaalin waa in la tijaabiyaa toddobaad kasta.
"Waa muhiim in la fahmo inay weli jiraan shaqaale aad u badan oo aan la ilaalin oo halis ugu jira inay si xun u bukoonaadaan ama u dhintaan COVID-19," ayaa lagu yiri bayaanka adeegga saxaafadda ee Aqalka Cad.
Ku guuldareysiga in loo hoggaansamo amarka tallaalka COVID-19 waxay la kulmi doontaa ganaaxyo culus ganacsiyada, taasoo wajihi doonta ganaax ku dhow $14,000 xadgudubkiiba.
Ganaaxyada ayaa kor u qaadi doona xadgudubyo badan, sare Aqalka Cad Saraakiisha ayaa yiri. Isla markiiba ma cadda in shaqaalaha la eryi karo haddii ay diidaan tallaalka ama baaritaanka.
Shuruuda qandaraaslayaasha federaalka ah ee la tallaalayo ayaa dib loo riixay muddo bil ah waxaana la dhaqan gelin doonaa isla taariikhdaas.
"Marka la gaaro Janaayo 4, 2022, xarumaha [caafimaadka] waa inay xaqiijiyaan in dhammaan shaqaaluhu ay heleen talaalada lagama maarmaanka u ah si si buuxda loo tallaalo - midkoodna laba qiyaasood oo Pfizer ah, laba qiyaasood oo Moderna ah, ama hal qiyaas Johnson & Johnson," Aqalka Cad ayuu yiri sarkaal sare.